I-Cloudberry, Cozy 2BHK iimbono ze-surreal, Shimla
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguJayati
*Ngoku sivulelwe ukusingathwa kwaye sixhotyiswe nge-corona nceda usithumele umyalezo ukuze wazi ngakumbi*
Ilungele ixesha elifutshane kunye nexesha elide, ikhaya lethu le-Attic libekwe ngokufanelekileyo kumgama oyi-30 min drive ukusuka eShimla mall.
Ibroadband yesantya esiphezulu somsebenzi osuka ekhaya, iTV yeLCD enkulu enetshaneli zeHD, izithethi, ikhitshi elisebenza ngokupheleleyo, iterrace bonfire/barbecue yokuphumla, phumla kwaye ukonwabele umbono.
Sinomgcini osisigxina kunye nokucoca yonke imihla. Silandela zonke izikhokelo ukwenza ukuhlala kwakho kukhuselekile kangangoko. Insta The_cloudberry
Eli khaya liphezulu le-Attic linemvakalelo yomthi ekhethekileyo, sihlala sinconywa ngokunambitheka okubandakanyekayo ekuhombiseni indlu.
La magumbi mabini aneefestile ezinkulu zepanoramic ezibonisa umbono omangalisayo weentaba.
Ithafa inelungiselelo lokuhlala le-4 kwaye ifumana ukukhanya kwelanga okwaneleyo imini yonke (ngaphandle kweemvula ngokuqinisekileyo)
Asiwakhuphi amagumbi ngokwahlukeneyo kunye neflethi yonke kunye njengoko indawo yokuhlala kunye ne-terrace ixhaphakile. Kukho izinyuko ezizimeleyo eziya endlwini. Ukuba uliqela elikhulu singadlala kule flethi ngale ingezantsi ukuze kuhlaliswe iqela lakho lemigulukudu :)
Indlu inikwe amandla nge-intanethi ye-4 G ye-Wifi, i-cable TV, inkqubo yesandi kunye noqhagamshelo lwe-Aux ngobuninzi be-HD english kunye ne-hindi yokuzonwabisa kunye neziteshi zezemidlalo, izifudumezi, iibhotile zamanzi ashushu, amanzi ashushu kunye nezinye izixhobo ukwenza ukuhlala kwakho kube ntofontofo kangangoko kunokwenzeka. .
Sihlala songeza izinto njengoko ziceliwe ziindwendwe ke qiniseka ukuba siphucula kuphela :)
- Isakhiwo esineflethi sinendawo yokupaka eyanele imoto enkulu okanye nokuba ngumhambi
-Ungalandela indawo yeemephu kwaye ufikelele ngqo kwipropathi
- Le ndlu ibekwe kufutshane nohola wendlela karhulumente
- Ukuqhuba ukuya eMashobra kubonwa kukuhle kakhulu ziindwendwe kunye nabahlali ngokufanayo
-Sinobudlelwane kunye nabaqhubi beekhabhi basekhaya kwaye sinokukunceda ucwangcise uhambo lwakho oluya kwiinduli zethu :)
-Ndicele iingcebiso malunga nokuba ungatya ntoni kwaye ubone ntoni.
4.84 · Izimvo eziyi-279
-Ungalandela indawo yemephu zikaGoogle kwaye ufikelele ngqo kwipropathi
-Ndicele iingcebiso malunga nokuba ungatya ntoni kwaye ubone ntoni
Kuya kubakho umnakekeli kwifowuni, ukongeza, ungandifowunela nanini na ukuba ufuna nantoni na :)